Kal-fadhigii 1 aad ee Golaha Dhexe Ee Jaaliyada DDSI North America Oo Maanta Lagu Qabtay Xarunta Gobolka Minnesota ee Minneapolis Iy Go' aamo Wax Ku'ool Ah Oo Kasoo Baxay. - Cakaara News
Kal-fadhigii 1 aad ee Golaha Dhexe Ee Jaaliyada DDSI North America Oo Maanta Lagu Qabtay Xarunta Gobolka Minnesota ee Minneapolis Iy Go' aamo Wax Ku'ool Ah Oo Kasoo Baxay.
Minnesota(CN) Axad.April.12.2015, waxaa maanta kal-fadhigoodi koobad ku yeeshay golaha dhexe XDSHSI ee jaaliyada dowlad deegaanka Somalida Ethiopia ee ku nool cariga Waqooyi Amerika magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee carigaasi Maraykanka.
Shirkan ay manta yesheen golaha dhexe ee jaaliyada dowlad deegaanka Somalida Ethiopia oo ay hogaaminayeen masuuliyiinta ugu saraysa ee xisbiga Jaaliyada DDSI ee North America ayaa waxaa kasoo qayb galay xubnha golha dhexe oo tiradooda guud ay dhantahay 51 xubnood. Waxaana lagu soo qaday qodobo badan oo horyaalay golaha dhexe ee jaaliyada dowlad deegaanka somalida ethiopia.
Ajandaha koobad ee shirka ayaa waxuu ahaa ansaxinta go'aamadi aay gaadhen gudiga fulinta ee jaaliyadu shirkii hore ee aay yesheen gudiga fulintu oo ahaa sidi aay jaaliyadu u hawl-gali lahayd iyo geedi socodka.
Gudoomiyaha jaaliyada North America mudane Maxamed Shugri Nuur (Sangaab) ayaa soo bandhigay dhigay qorshayaasha muhiim ka ah ee jaaliyada taaso ahmiyad u ahayd maamulka iyo golaha dhexe ee jaaliyada DDSI North America.
Gudoomiyaha guud ee xisbiga mudane Suldaan Maxamed Bade oo ugu horayntii kahadalay shirkan golaha dhexe ee Jaaliyada ayaa faah faahin dheeri kabixiyay muhiimada qorshayaasha shirkan isagoo carabka ku dhuftay in jaaliyadu ay lagama maar maan u tahay in lahelo saldhig iyo xafiis taasoo kamid ahayd ajendayaasha shirka. Waxayna xubnaha golaha dhexe ay cod buuxa ku ansixiyay in muhiimada koobad in la siiyo sidi loo furi laha xafiis ay jaaliyadu ku shaqeyso.
Golaha dhaxe ayaa dood dheer iyo falanqayn kadib ansixiyay misaaniyada jaaliyadu ay ku shaqayn doonto oo ah kharashka ku bixi-doona xafiiska ay jaaliyadu dagi doonto maadama ay lagama maar maan tahay in lahelo saldhig (base) hawlaha geedi socod ee jaaliyada Waqooyi Ameerika.
Maamulka jaaliyada ayaa waxuu si cilmiyaysan u soo bandhigay waxa loo baahan yahay iyo waliba jahada aay jaaliyadu u socoto oo ahayd mid aad muhiim u ah.
Golaha dhexe ee jaaliyada iyo gudiga fulinta ayaa waxay manta sameeyeen arin taarikh ah taaso ahayd in aay miiska saaren kharashkii ku bixi lahaa jaaliyada, waxaa kale oo ay golaha dhexe jaaliyadu balan qaaday in ay sii wadi doonan waajibad kooda shaqo. Waxayna sheegeen in aay oofin doonan balantii ay u qaadeen shacabka deegaankooda taasoo ay isla qaateen madaxda sare ee DDSI ee uu ugu horeeyo madaxweynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar.
Dhamaan xubnaha xisbiga ee Jaaliyada DDSI Waqooyi Ameeriaka ayaa sii guud uga mahadcelisay wax qabadka xukumada ay ku talabsatay mudadii ay jirtay. Waxaa kale oo jaaliyada DDSI ee W.Ameerika aad u soo dhaweysay mashaaricda waaweyn ee ay dowlada federaalka iyo xukuumada DDSI kawadaan deegaanka iyo dalkaba sida Jaamacada Labaad ee DDSI laga hirgalinayo ee Qabridahar University , Warshada Sonkorta Godey, mashruuca biyo xidheenka Xamaro iyo guud ahaanba mashaariicda waawayn ee dalka iyo deegaankaba.
Ugu danbeyn jaaliyada DDSI ee North America ayaa waxay mahadcelin balaadhan u jeediyeen mudane Faysal Sayid iyo mudane Muhumed Suldan Abdi Suldan Ali sonkor oo marti galiyay kulanka maanta ka dhacay magaalada Minneapolis.
Xisbiga Jaaliyada DDSI ee Waqooyi Ameerika iyo golihiisa dhexe ayaa maanta kal fadhigoodii koobaad kusoo dhamaaday jawi aad u qurux badan iyadoo ay xubnaha golha dhexe kamuuqatay dar dar galin ay u heelan yihiin hawlaha shaqo ee horumarinta DDSI.